Rohingya Students Forum: March 2018
၁ ။ မုစ်လင်မ်တစ်ယောက်၏ အမှားအပေါ် ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။
၂ ။ သူငိုနေလျှင် သနားပါ။
၃ ။ သူ၏အပြစ်ကို ဖုံးထားပါ။
၄ ။ သူ၏ တောင်းပန်မှုကို လက်ခံပါ။
၅ ။ သူ၏ ဒုက္ခကို ကူညီဖယ်ရှားပေးပါ။
၆ ။ သူ၏အပေါ် အစဉ်ကောင်းပါ။
၇ ။ သူ့အချစ်ကို အစဉ်ထိန်းသိမ်ပါ။
၈ ။ သူ့ကိုပေးထားသော ကတိတည်ပါစေ။
၉ ။ သူနာမကျန်းဖြစ်နေက သွားရောက်အားပေးပါ။
၁၀ ။ သူကွယ်လွန်က ဒုအာပြုပို့ပါ။
၁၁ ။ သူဖိတ်ကြားက လက်ခံသွားရောက်ပါ။
၁၂ ။ သူ့လက်ဆောင်ကို လက်ခံပါ။
၁၃ ။ သူပြုလာသော ကျေးဇူးအတွက် ကျေးဇူးတုန့်ပြန်ပါ။
၁၄ ။ သူ၏ကူညီရိုင်းပင်းမှုများကို ကျေးဇူးတင် တန်ဖိုးထားပါ။
၁၅ ။ သူ့ကိုလိုအပ်လျှင် ကူညီပါ။
၁၆ ။ သူ့မိသားစုကိုလည်း ဂရုစိုက်ပါ။
၁၇ ။ သူ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် ပါဝင်ကူညီပါ။
၁၈ ။ သူ့အကြံဥာဏ်ကို နာယူပါ။
၁၉ ။ သူမေတ္တာရပ်ခံလျှင် မငြင်းဆန်ပါနှင့်။
၂၀ ။ သူ့ရည်မှန်းချက်ကို စိတ်ပျက်အောင် မလုပ်မိပါစေနှင့်။
၂၁ ။ သူနှာချေ၍ ” အလ်ဟမ်ဒုလိလ္လာဟ် ” ဆိုလျှင် ” ယရ်ဟမုကလ္လာဟ် ” ဆိုကာ ပြန်ကြားပါ။
၂၂ ။ သူ၏ပျောက်ရှပစ္စည်းတွေ့ရှိမိက သူ့ထံအရောက်ပို့ပေးပါ။
၂၃ ။ သူစလာမ်ပေး နှုတ်ဆက်လာက စလာမ်ပြန်ကြားနှုတ်ဆက်ပါ။
၂၄ ။ သူနှင့် စကားပြောဆိုတိုင်း သိမ်မွေ့ယဉ်ကျေးနူးညံ့ပါ။
၂၅ ။ သူ့ကို ကောင်းကျိုးပြုပါ။
၂၆ ။ သူယုံ၍ ကျိန်ဆိုမိလျှင် တတ်နိုင်သရွေ့ လိုက်လျော့လိုက်ပါ။
၂၇ ။ သူ့ကို တစ်ယောက်ယောက်က ဗိုလ်ကျစိုးမိုးလာလျှင် ကာကွယ်ပေးပါ။ သူက ဗိုလ်ကျစိုးမိုးရေးလုပ်လျှင် တားမြစ်ပိတ်ပင်ပါ။
၂၈ ။ သူ့ကို မိတ်ဖက်လုပ်ပါ။ မိတ်ဖျက်မဖြစ်ပါစေနှင့်။
၂၉ ။ သူ့ကို အပုပ်မချပါနှင့်။
၃၀ ။ ကိုယ်ကြိုက်သည်ကို သူ့အတွက် ကြိုက်ပါ။
၃၁ ။ သူနှင့်တွေ့တိုင်း စလာမ်ပေးနှုတ်ဆက်ပါ။ အမျိုးသားချင်း ၊ အမျိုးသမီးချင်း လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းသည် ကောင်းလှသည်။
၃၂ ။ သူနှင့်ရန်ဖြစ်မိက သုံးရက်ထက်ပို၍ အဆက်မဖြတ်ပါနှင့်။
၃၃ ။ သူ့အပေါ် မကောင်းမမြင်ပါနှင့်။
၃၄ ။ သူ့အပေါ် မနာလိုဝန်တိုမဖြစ်ပါနှင့်။ မုန်းမာန်မပွားပါနှင့်။
၃၅ ။ သူ့ကို ကောင်းမှုကောင်းရာလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းနေပါ။ မကောင်းမှု မကောင်းရာမလုပ်ဖို့ တားမြစ်နေပါ။
၃၆ ။ ကြီးသူကို ရိုသေပါ။ ငယ်သူကို သနားပါ။
၃၇ ။ မုစ်လင်မ်နှစ်ယောက် ကတောက်ကဆဖြစ်နေက ဖြန်ဖြေပေးပါ။
၃၈ ။ သူ့နောက်ကွယ် သူ့အတင်းအဖျင်းမပြောပါနှင့်။
၃၉ ။ သူ့သိက္ခာ နှင့် သူ့ရိက္ခာ တိမ်းပါးဆုံးရှုံးအောင် မလုပ်မိပါစေနှင့်။
၄၀ ။ သူ့ကို ထခိုင်းလိုက်ပြီး ကိုယ်က အဲဒီနေရာမှာ မထိုင်လိုက်ပါနှင့်။
( ဗဟရ်ှသီဇေဝရ်ကျမ်း )
📆 ဟိဂ်ျရီ ၁၄၃၉ ၊ မုဟရ်ရမ်လ ( ၁၇ )ရက်📆
📆 ၈ . ၁၀ . ၂၀၁၇ ( တနင်္ဂနွေနေ့)
Posted by Rohang king at 10:39 AM
❇ ရဂျဗ်လမြတ်အကြောင်း ❇
ဒီရဂျဗ်လမြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မှန်ကန်ပြည့်စုံတဲ့ စနဒ် ဆင့်ပြန်ချက်နဲ့တကွ တမန်တော်မြတ် ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) မိန့်ဆိုခဲ့တာကတော့ ဒီရဂျဗ်လရဲ့ ဆန်းဦးစလကို မြင်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ကိုယ်တော်မြတ် ( صلی اللّہ علیہ وسلم )က ဒီလိုဒုအာလုပ်တော်မူတယ်။
(( أَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ ))
" အို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ကျွန်တော်မျိုးတို့အား ရဂျဗ်လနှင့်ယှအ်ဗာန်လများတွင် ဗရ်ကသ်မင်္ဂလာ ချီးမြှင့်တော်မူပါ။ ပြီးနောက် ရမသွာန်လမြတ်ကိုပါ ချီးမြှင့်တော်မူပါ " လို့ဆိုတယ်။
ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်မျိုး၏ သက်တမ်းကို ရမသွာန်လကုန်သည်အထိ ထားပေးပါ။ တနည်းအားဖြင့် ရမသွာန်လမရောက်မီအလျင် အဲဒီလမြတ်ကို ကြိုဆိုခြင်း ဖြစ်တယ်။ ဒီဒုအာဟာ ခိုင်လုံတဲ့ စနဒ်နဲ့တကွ ဆင့်ပြန်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအပေါ် အမလ်လုပ်ခြင်းဟာ စုန္နသ် ဖြစ်တယ်။
ယှရီအသ်တရားတော်မှာ ဒီအချက်ထက် ပိုထင်ရှားတဲ့ ဆင့်ဆိုချက် လူအများကြားမှာ ပြုလုပ်နေကြတဲ့ အခြားကျင့်စဉ်များအားလုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယှရီအသ်မှာ ထင်ရှားတဲ့ ဆင့်ဆိုချက်တွေ ဘာမှမရှိဘူး။
ဥပမာ ရဂျဗ်လ ( ၂၇ )ရက်နေ့ညနဲ့ပတ်သက်ပြီး မဲအ့်ရာဂ်ျလို့သတ်မှတ်ကြတယ်။ အဲဒီညမှာ ကဒရ်ညမြတ် ကဲ့သို့ တန်ဖိုးရှိစွာနဲ့ ကုန်ဆုံးစေလိုကြတယ်။ ကဒရ်ညကဲ့သို့ဘဲ ထူးမြတ်တဲ့ည ၊ အကျိုးရှိတဲ့ ညလို့ ယူဆနေ ကြတယ်။ ကျွန်ုပ် ( မုဖ်သီသကီး ) တစ်နေရာမှာ ဒီလိုရေးထားတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ မဲအ့်ရာဂ်ျညက ကဒရ်ညထက် ထူးမြတ်မြင့်မြတ်မှုမှာ သာလွန်သေးတယ်လို့ ရေးထားတာ တွေ့ရတယ်။ အဲဒီညမှာ လူတွေက သီးခြားသော နမားဇ်များနဲ့ ကျော်ကြားအောင်ပြလာကြတယ်။ ဒီညမျိုးမှာ နမားဇ်ကို ဘာနိယသ်နဲ့ ဘယ်နှစ် ရကအသ် ဖတ်ရမယ်။ ဘာစူရဟ်တွေ တွဲရမယ် ဆိုတာကအစ သတ်မှတ်လာကြတယ်။ အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်သာ သိတော့တယ်။ မှတ်ထားပါ မိတ်ဆွေတို့ ! ဒီလိုနမားဇ်မျိုးတွေကို ဒီလိုသတ်မှတ်မှုမျိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခိုင်လုံတဲ့ သက်သေအထောက်အထား ယှရီအသ်တရားတော်မှာ မရှိဘူး။
ပထမဦးဆုံးအချက်က ရဂျဗ်လ ( ၂၇ ) ရက်မှာ ကိုယ်တော်မြတ် ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) မဲအ့်ရာဂ်ျ ကောင်းကင်ခရီး ကြွမြန်းသွားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခိုင်လုံတဲ့ အထောက်အထားမရှိဘူး။ တချို့က ရဗီအုလ်အောဝ်ဝလ်လမှာ ကိုယ်တော်မြတ် ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) မဲအ့်ရာဂ်ျခရီး ကြွမြန်းတယ်လို့ ဆိုကြပေမယ့် တချို့က ရဂျဗ်လလို့ ဆင့်ပြန်ပြီး တချို့ကတော့ တခြားလလို့ ဆင့်ပြန်ကြတယ်။
ခြုံကြည့်လိုက်ရင် တမန်တော်မြတ် ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) မဲအ့်ရာဂ်ျခရီး ကြွမြန်းတဲ့ရက်ကို အတိအကျ ဆင့်ပြန်ထားခြင်း မရှိဘူး။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး စဉ်းစားစရာ အချက်တစ်ခုက ဒီညဟာ အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ ယှဗ္ဗိကဒရ်ညကဲ့သို့ပင် ထူးမြတ်တဲ့ည ဖြစ်ရိုးမှန်ရင် နှောင်းခေတ်လူတွေက ဒီညကို အတိအကျ သတ်မှတ် ဆင့်ပြန်ခဲ့မှာဘဲ။ တကယ်တော့ ဒီညကို ယခုတိုင် တိကျတဲ့ ဆင့်ပြန်ချက်တွေ၊ ခိုင်လုံတဲ့ဆင့်ပြန်ချက်တွေ မရှိတဲ့အတွက် ဒီရဂျဗ်လ ( ၂၇ )ရက်ညဟာ မဲအ့်ရာဂ်ျညအဖြစ် တိတိကျကျ မသတ်မှတ်နိုင်ဘူး။
အကယ်၍ ဒီရဂျဗ်လ ( ၂၇ )ရက်ညမှာဘဲ တမန်တော်မြတ် ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) မဲအ့်ရာဂ်ျ ကောင်းကင် ခရီး ကြွမြန်းတော်မူခဲ့တယ်ထားပါဦး။ အဲဒီခရီးစဉ်မှာ အလွန်ကြီးကျယ် မွန်မြတ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ တယ်။ ပထမတစ်ချက်က တမန်တော်မြတ် ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) ကိုယ်တော်တိုင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နဲ့ အနီးဆုံးနေရာအထိ ခစားခွင့်ရခဲ့တယ်။ ၎င်းနောက် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကို " ဒီဒါရ် " ဖူးမြှော်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဒုတိယတစ်ချက်က ကိုယ်တော်မြတ် ( صلی اللّہ علیہ وسلم )နဲ့ အုမ္မသ်သားများအတွက် နမားဇ် ( ၅ ) ကြိမ်ကို လက်ဆောင်တော်အဖြစ် ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်အီမာန်ရှင် မုစ်လင်မ်မှ မငြင်းနိုင်ဘူး။
ဒီအဖြစ်အပျက်က နဗဝီ ( ၅ ) ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း ( ၁၈ )နှစ်တိုင်တိုင် ကိုယ်တော်မြတ် ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) သက်ရှိထင်ရှားနေထိုင်တော်မူခဲ့တယ်။ အဲဒီ ( ၁၈ )နှစ်ကာလအတွင်းမှာ တမန်တော်မြတ် ( صلی اللّہ علیہ وسلم )က ကိုယ်တိုင် ဒီမဲအ့်ရာဂ်ျနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာအမိန့်မှ ပေးထားတဲ့ အထောက်အထားတွေ မတွေ့ရဘူး။ အဲဒီညမှာ သီးသန့် အစီအစဉ်နဲ့ အိဗာဒသ် လုပ်ဖို့ အမိန့်တော်လည်း မပေးခဲ့ဘူး။ ဒီညဟာ ကဒရ်ညကဲ့သို့ စဝါးဗ်ရစေအောင်၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ည ဖြစ်သောကြောင့် နိုးနိုးကြားကြား ဝိရိယနဲ့ အမလ်ထဲနေဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ အထောက်အထား အမိန့်သြဝါဒ လည်း ဘာတစ်ခွန်းမှ မမိန့်ခဲ့ဘူး။ ကိုယ်တော်မြတ် ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) ခေတ်မှာလည်း ဒီညမှာ သီးသန့် နိုးကြားလျက် ဘာမှမလုပ်ခဲ့သလို ဆွဟာဗဟ်သာဝကတွေကလည်း ဒီညနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ နိုးဆော် တိုက်တွန်းမှုမျိုး ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တိုင် အဲဒီညမှာ နိုးကြားလျက် သီးသန့် အမလ်အိဗာဒသ်လုပ်ခဲ့တာမျိုးတွေ မတွေ့ရဘူး။
တမန်တော်မြတ် ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) ဝဖှာသ်ဖြစ် ကွယ်လွန်တော်မူသွားပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း ( ၁၀၀ ) တိုင်တိုင် ဆွဟာဗဟ်များ ဒီဒုန္နယာလောကမှာ သက်ရှိထင်ရှားနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီနှစ်ပေါင်း ( ၁၀၀ ) အတွင်းမှာ ဆွဟာဗဟ်များက ဒီ မဲအ့်ရာဂ်ျနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရဂျဗ်လ ( ၂၇ )ရက်ညမှာ သီးသန့် အမလ် အိဗာဒသ်ရဲ့အစီအစဉ် အခမ်းအနားမျိုး ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ခိုင်လုံတဲ့ သက်သေအထောက်အထား ဘာမှ မတွေ့ခဲ့ရဘူး။ ဒါကြောင့် တမန်တော်မြတ် ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) ကိုယ်တိုင် မလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စ၊ ဆွဟာဗဟ်များလည်း မလုပ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စရပ်ကို ဒီးန်သာသနာတော်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် စုန္နသ်တစ်ခုလို့ သတ်မှတ်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် စုန္နသ်တစ်ခုလိုမျိုး အမလ်လုပ်ခြင်း စတဲ့အရာအားလုံးဟာ " ဗိဒ်အသ် " တရားသစ်တီထွင်ခြင်း ဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ တစ်ဦးတစ်ယောက်က ( معاذاللّه အရှင်မြတ်ထံခိုလှုံပါ၏ ) ဒီလိုဆိုခဲ့မယ်။ " ကျွန်တော်ကတော့ဖြင့် တမန်တော်မြတ် ( صلی اللّہ علیہ وسلم )ထက် ပိုပြီး တတ်သိနားလည်လို့ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော် ကတော့ဖြင့် ဆွဟာဗဟ်များထက် သာပိုပြီး ဒီးန်သာသနာတော်ကို ချစ်မြတ်နိုးလို့ပါ။ ဒါကြောင့် သူတို့မလုပ်လည်း ကျွန်တော်ကတော့ လုပ်မှာဘဲ " လို့ဆိုခဲ့ရင်တော့ ဒီလူထက်ပိုပြီး မိုက်မဲသူ၊ အသိဥာဏ် ကင်းမဲ့တဲ့သူ ဒီဒုန္နယာလောကထဲ ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့ ဒီးန်သာသနာရေးနဲ့ ဘယ်လောက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ပတ်သက်ဆက်စပ်နေငြားလည်း တကယ်တမ်းမှာတော့ ဆွဟာဗဟ်များ၊ သာဗိအီးန်များ၊ သဗသာဗိအီးန်များသာလျှင် အားလုံးထက် ပိုပြီး ဒီးန်သာသနာကို သိခဲ့ကြသူတွေ၊ ဒီးန်သာသနာကို နားလည်ခဲ့ကြသူတွေ၊ ဒီးန်သာသနာတော်အပေါ် ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ကြသူတွေ၊ ဒီးန်သာသနာတော်အပေါ် နာခံကျင့်သုံးကြသူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ ယခု လူတစ်ယောက်က ပြောမယ်။ " ကျွန်တော်ကတော့ သူတို့ထက်ပိုပြီး နားလည်ပါတယ်။ သူတို့ထက်ပိုပြီး ဒီးန်သာသနာတော်ကို လိုလားစိတ် ရှိသူပါ။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ထက်ပိုပြီး ဒီးန်သာသနာအပေါ် နာခံကျင့်သုံးတဲ့သူပါ " လို့ ပြောရင်တော့ ဒီလူဟာ နလဗိန်းတုံးလူ ၊ တကယ်တမ်း ဒီးန်သာသနာတော်ကို ဘာမှမသိတဲ့ လူတစ်ယောက်လို့ သတ်မှတ်ရုံပေါ့။
ဒါကြောင့် ဒီ ရဂျဗ်လ ( ၂၇ )ရက်ညမှာ သီးသန့် အမလ်တစ်စုံတစ်ရာလုပ်ခြင်း " ဗိဒ်အသ် " ဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ ဒီညလိုဘဲ တခြားညတွေမှာ အမလ်လုပ်နေမယ်။ နေ့စဉ် ဒါမှမဟုတ် အစဉ်ပြုနေကျ အမလ်အဖြစ်နဲ့ ဒီ ( ၂၇ ) ရက်ညမှာလည်း ဆက်လက်ပြုလုပ်မြဲ လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။
ဒီလိုဘဲ ရဂျဗ်လ ( ၂၇ )ရက်နေ့မှာ တချို့က ရိုဇဟ်ထားကြတယ်။ အာယှူရဟ်ရိုဇဟ်တို့ ၊ အရဖှသ်နေ့ရဲ့ ရိုဇဟ်တို့လို မွန်မြတ်ထူးကဲတဲ့ ရိုဇဟ်လို သတ်မှတ် ယုံကြည်နေကြတယ်။ မှတ်ထားရမှာက ဒီရိုဇဟ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မခိုင်မာတဲ့ အဆိုတစ်ခုနှစ်ခုတော့ရှိတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ ဆင့်ပြန်ချက်ကတော့ တစ်ခုမှ မရှိဘူး။
ဟဇ်ရသ် အုမရ် ( رضی اللّہ عنہ )သခင်ရဲ့ ခိလာဖှသ်ခေတ်မှာ လူတချို့က ဒီရဂျဗ်လ ( ၂၇ )ရက်နေ့မှာ သီးသန့်ရိုဇဟ် ထားကြတယ်။ ဟဇ်ရသ် အုမရ် ( رضی اللّہ عنہ ) သခင်ကလည်း သူ့ခေတ်မှာ သူသက်ရှိ ထင်ရှားရှိနေစဉ်အတွင်းမှာ ဒီးန်သာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အနည်းငယ် မှားယွင်းမှုမျိုးပင်ဖြစ်စေ လက်မခံနိုင်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီစကားကြားတာနဲ့ချက်ချင်း အိမ်ကနေထွက်ပြီး အဲဒီလူတွေထံသွားတွေ့တယ်။ နောက်ပြီး အတင်းအဓမ္မ လူတွေကို အစားအသောက် တစ်စုံတစ်ရာ စားခိုင်းတယ်။ " အသင်တို့ ရိုဇဟ်မထားကြပါဘူးဆိုတဲ့ အထောက်အထားပြနိုင်ဖို့ ငါ အုမရ် ရှေ့မှာ စားသောက်ပြရမယ် " လို့ ခိုင်းတယ်။ ဒါမှလူတွေရဲ့အထင်မှာ ဒီရိုဇဟ်ဟာ ဘာမှထူးခြားတဲ့ ရိုဇဟ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို အထင်အရှား သိလာမှာ ဖြစ်တယ်။ တခြား နဖိလ်ရိုဇဟ်များကဲ့သို့ နဖိလ်ရိုဇဟ်အဆင့်မျှသာရှိတယ်။ တခြားနေ့တွေနဲ့ ဘာမှမကွာဘူး။ ဟဇ်ရသ် အုမရ် ( رضی اللّہ عنہ ) သခင်ကြီးက ဒီကိစ္စကို " ဗိဒ်အသ် " ဖြစ်လို့ အင်အားသုံးပြီး ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီးန်သာသနာတော်ထဲမှာ ဘာမှ အတိုးအလျော့လုပ်တာကို မကြိုက်ဘူး။
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်က " ဘာလဲ ? ကျွန်တော်တို့ ဒီညမှာ တစ်ညလုံး နိုးကြားလျက် အမလ်အိဗာဒသ်လုပ်မယ်။ နေ့မှာ ရိုဇဟ်ထားကြမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ မကောင်းမှုအလုပ်လား? သူခိုး ဓါးပြ အလုပ်ဖြစ်လို့လား ? မူးယစ်ရမ်းကားတဲ့ အလုပ်ဖြစ်လို့လား ? ဒါကို ဘာ့ကြောင့် မကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ သတ်မှတ်ရတာလဲ ? လို့ စောဒကတက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ...
ဟဇ်ရသ် အုမရ် ( رضی اللّہ عنہ ) သခင်ဆိုတဲ့ ဆွဟာဗဟ်ကြီးက ဘာ့ကြောင့်တားမြစ်ရတာလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။
အဲဒီနေ့မှာ သီးသန့်ရိုဇဟ်ထားဖို့ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က အမိန့်မပေးထားဘူး။ ဒါကို မိမိဘက်က အသစ်ထွင်ပြီး ကိုယ့်သဘောနဲ့ ဓလေ့ထုံးစံ အစဉ်အလာတစ်ခုအဖြစ် လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းကပင်လျှင် အပြစ်ထိုက်နေတယ်။ ကျွန်ုပ် ( မုဖ်သီသကီး ) အကြိမ်ကြိမ် တင်ပြခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဒီးန်သာသနာတော်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဝိသေသကိုက နာခံခြင်း ဖြစ်တယ်။ " ငါအရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်တော်ကို နာခံကြ။ ငါအရှင့် ရစူလ်ရဲ့ အမိန့်ကို နာခံကြ " လို့ဆိုထားတယ်။ အကယ်၍ အရှင်မြတ်က နမားဇ်ဖတ်ကြလို့ အမိန့်ပေးတဲ့အခါ နမားဇ်ဖတ်ခြင်းဟာလည်း အိဗာဒသ် ဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ အရှင်မြတ်က နမားဇ်မဖတ်နဲ့လို့ အမိန့်ပေးတဲ့ အခါ နမားဇ်မဖတ်ခြင်းဟာလည်း အိဗာဒသ်ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုဘဲ ရိုဇဟ်ထားလို့ အမိန့်ပေးတဲ့အခါ ရိုဇဟ် ထားခြင်းဟာလည်း အိဗာဒသ် ဖြစ်တယ်။ ရိုဇဟ်မထားဖို့ အမိန့်ပေးတဲ့အခါ ရိုဇဟ် မထားခြင်းဟာ လည်း အိဗာဒသ် ဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ တားမြစ်ထားတဲ့အချိန်မှာ ရိုဇဟ်ထားခဲ့ရင် ဒီးန်သာသနာ့အမိန့်ကို ချိုးဖေါက်ရာကျတယ်။ ဒီးန်သာသနာတော်ကို ဆန့်ကျင်ရာရောက်တယ်။ ဒီးန်သာသနာ့ရဲ့အလုပ်တာဝန်ဝတ္တရားအားလုံးဟာ အမိန့်နာခံခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်။
အကယ်၍ တစ်ဦးတစ်ယောက်က ဒီရဂျဗ်လ ( ၂၇ ) ရက်နေ့မှာ ထူးထူးခြားခြား ရိုဇဟ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလူဟာ ဒီးန်သာသနာတော်မှာ အပိုချဲ့ထွင်ခြင်းပဲပေါ့။ ဒီလို ထူးထူးခြားခြားသတ်မှတ်ပြီး ရိုဇဟ်ထားခြင်းဟာ မပိုင်ဘူး။ အကယ်၍ တခြားရက်တွေမှာ ဒီလိုဘဲ ဒီရက်မှာလည်း ရိုဇဟ်ထားခဲ့ရင်တော့ အကြောင်း မဟုတ်ဘူး။ တားမြစ်ချက်လည်း မရှိပါဘူး။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ဒီရဂျဗ်လ ( ၂၇ )ရက်နေ့မှာဘဲ ထူးထူးခြားခြား စဝါးဗ်ပိုရတဲ့ စုန္နသ်ရိုဇဟ်အဖြစ် သီးခြားသတ်မှတ်ပြီး ညမှာ အမလ်အိဗာဒသ်လုပ်ခြင်း၊ နေ့မှာ ရိုဇဟ်ထားခြင်း အစရှိသည်များကတော့ " ဗိဒ်အသ် " တရားသစ်တီထွင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ မလုပ်ပိုင်ဘူး။
မဲအ့်ရာဂ်ျညဟာ အလွန်ထင်ရှားခဲ့တဲ့ ညတစ်ည ဖြစ်တယ်။ အဲဒီညမှာ တမန်တော်မြတ် ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) မိုးကောင်းကင်ခရီးကို ကြွမြန်းတော်မူခဲ့တယ်။ သို့သော်လည်း ဒီနေ့ အစ္စလာမ့်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ကြီးကျယ်အရေးပါတဲ့ အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီး ဒီးန်သာသနာတော်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဖွရ်သ်ွတာဝန်၊ ဝါဂျိဗ်တာဝန်တွေထက်ပိုပြီး အကြီးအကျယ်အရေးပါတဲ့ အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီ။ အဲ့ဒါကတော့ ရဂျဗ်လ ( ၂၇ )ရက်နေ့ညမှာ မုန့်အချိုလုပ်ခြင်းနဲ့ဝေငှခြင်း ဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ တစ်ဦးတစ်ယောက်က ဒီလူဟာ နမားဇ်ဖတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဖတ်သည်ဖြစ်စေ၊ ရိုဇဟ်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ မထားသည်ဖြစ်စေ၊ အပြစ်ဂုနာဟ်ဒုစရိုက်ကနေ ရှောင်ကြဉ်သည်ဖြစ်စေ၊ မရှောင်ကြဉ်သည်ဖြစ်စေပေါ့ ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့မှာ ဒီလို မုန့်အချို မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင် ဒီလူဟာ မုစ်လင်မ် မဟုတ်တော့ဘူး။ (( တချို့နေရာဒေသမှာ မဲအ်ရာဂ်ျည အထိမ်းအမှတ်နဲ့ မောဝ်လူးဒ်ယှရီးဖ်ဖတ်ကြတယ်။ ကိယာမ်တွေ ရပ်ကြတယ်။ အဲဒီ အခမ်းအနားမှာ မပါဝင်ရင် တမန်တော်မြတ် ( صلی اللّہ علیہ وسلم )ကို မချစ်တဲ့သူ ၊ မုစ်လင်မ် မပီသသလိုလို ကြည့်တာခံရတယ်။)) အကယ်၍ တစ်ဦးတစ်ယောက်က ဒီဓလေ့ထုံးစံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း မလုပ်ဘူး။ တခြားသူများကိုလည်း မလုပ်ဖို့ တားမြစ်လာမယ်ဆိုရင် အဲဒီသူဟာ ကောင်းကောင်း ကျိန်ဆဲခံရမယ်။ ပြစ်တင်ရှုံ့ချခြင်းခံရလိမ့်မယ်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဘဲ သိတော့တယ်။ ဒီလို မုန့်ချိုပွဲတွေ၊ လုပ်နေတဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေ ဘယ်လိုပေါ်လာသလဲဆိုတာ မသိဘူး။ ကုရ်အာန်နဲ့ဟဒီးဆ်မှာလည်း မရှိဘူး။ ဆွဟာဗဟ်တွေ၊ သာဗိအီးန်တွေ၊ သဗသာဗိအီးန်တွေရဲ့ လက်ထက်မှာလည်းမရှိဘူး။ ဒီအစွဲဟာ ဒီလောက်တောင် ကြီးထွားလာကြပြီ။ အိမ်မှာ ဒီးန်သာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ်ဘာ အထောက်အထား နိမိတ်လက္ခဏာမှ မရှိရင် နေပါစေ။ ဒီလို မုန့်ပွဲတွေ၊ ဓလေ့ထုံးစံတွေ ရှိနေရင် ကျေနပ်ပြီ။ ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တတွေက ဒီလိုပွဲလမ်း အခမ်းအနားလေးတွေ၊ စားသောက်ပွဲလေးတွေ လုပ်ရမှာကို ကြိုက်ကြတယ်။ ဝါသနာလည်း ပါကြတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်၊ တစ်အိမ်နဲ့တစ်အိမ် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် တွေ့ဆုံကြတဲ့ပွဲမျိုး စိတ်ပျော်ရွှင်ဖွယ် အခမ်းအနားမျိုးလေးတွေ လုပ်နေကြတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အိမ်တိုင်းမှာ ပူရီတွေ ကြော်တယ်။ ဟလဝါမုန့်တွေ ထိုးကြတယ်။ ဒါ့ပြင် ဒီအိမ်ကမုန့်ကို ဟိုအိမ်ပို့ ၊ ဟိုအိမ်က မုန့်ကို ဒီအိမ်ပို့နဲ့ အရပ်ထဲ ပွဲတစ်ခု ဖြစ်နေကြ တယ်။ ယှိုင်တွာန်ကလည်း လူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာ ဒီလိုပွဲမျိုးကို အရသာတွေ့စေတယ်။ စိတ်ဝင်စားစေတယ်။ ဒီလိုနဲ့လူတွေက နမားဇ်ဖတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဖတ်သည်ဖြစ်စေ အရေးမကြီးတော့ဘူး။ အရေးကြီးတာ မုန့်ဝေဖို့၊ စားသောက်ပွဲလုပ်ဖို့ဘဲ။
ဒီအုမ္မသ်ဟာ ဒီလို အလဟဿ အချည်းအနှီးလုပ်ငန်းထဲမှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နစ်မြုပ်သွားခဲ့ပြီ။ အစစ်အမှန် အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေ တိမ်ကော ပျောက်ကွယ်နေကြပြီ။ လူတော်တော်များများဟာ ဒီအလုပ်ကို မသိနားမလည်ကြလို့ ဒီလိုပြုလုပ်နစ်မြုပ်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။ အစွဲတော့မရှိကြဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီးန်သာသနာတော်ကို မသိနားမလည်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း အီဒုလ်အသ်ွဟာ ( ကုရ်ဗာနီအီးဒ် ) နေ့တွေလိုဘဲ အရေးကြီးတဲ့နေ့၊ ကုရ်အာန်နဲ့ဟဒီးဆ်တော်တွေအရ အထောက်အထား ခိုင်လုံစွာ ရှိနေတဲ့ နေ့တစ်နေ့လို့ ထင်မှတ်နေကြခြင်း ဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် အုမ္မသ်ကို ချိုသာနူးညံ့စွာနဲ့ ပြောဆို တင်ပြပြီး ရှောင်ကြဉ်ကြစေလိုတယ်။
အချုပ်ဆိုရရင် ဒီရဂျဗ်လမြတ်ဟာ လမြတ်ရမသွာန်ရဲ့ အကြိုလဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလရောက်ရင် မိမိကိုယ်ကို လမြတ်ရမသွာန်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြရမယ်။ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်တော်မြတ် ( صلی اللّہ علیہ وسلم )ကဒီရဂျဗ်လမှာ ဒီလိုဒုအာလုပ်တော်မူခဲ့တယ်။
လူအများကိုလည်း ကြိုတင်သတိပေးထားတယ်။ ဒီလမြတ်ရမသွာန်ရောက်ရင် ကောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေထဲမှာ အချိန်အများဆုံးကုန်လွန်စေနိုင်ဖို့အတွက် ဖိက်ရ် သောက ပိုက်ခိုင်းထားပါတယ်။
(( အမြင်မမှား သတိထားပြီး ရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေ ))
အမလ်ပြုကျင့်နိုင်ကြပါစေ ... အာမီးန်
( အိဆ်ွလာဟီး ခုသ်ဗားသ် )
ရှမ်းပြည်သားလေး sia hak khay
📆 ဟိဂ်ျရီ ၁၄၃၉ ၊ ဂျမာဒဆ်ဆာနီလ ( ၂၆ )ရက်📆
📆 ၁၅ . ၃ . ၂၀၁၈ ( ကြာသပတေးနေ့)📆
🌛 အလင်းမဲ့ကမ္ဘာ 🌜
-ရိုသွေး ၂၃-၈-၂၀၁၁ (အင်္ဂါ)
Posted by Rohang king at 9:54 PM
"ဆရာ၊ ဆယ်တန်း မြန်မာစာ ခက်ဆစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိချင်တာကလေးတွေ မေးချင်လို့ပါ"
"ခက်ဆစ် ဖွင့်ဆိုချက်မှာ ပုဒ်မခံပြီး နှစ်ခု သုံးခု ဖွင့်ဆိုထားရင် တစ်ခုပဲ ကျက်စရာ လိုတယ်၊ တစ်ခုပဲ ဖြေလို့ ရတယ်ဆို"
"အစ်မကြီး တစ်ယောက်က ပြောတာပါ"
"သူက ဘာ့ကြောင့် ပြောတာတဲ့လဲ"
"မြန်မာစာပါမောက္ခရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်မှာ ပါတယ်လို့ သူ့ကို သင်ခဲ့တဲ့ ဆရာတွေက ပြောသတဲ့ဆရာ"
"သြော်..သူ့ဆရာတွေက ၂၀၀၁ ခုနှစ်တုန်းက ဆရာမောင်ခင်မင် လမ်းညွှန်ခဲ့တာကို ပြောတာ ဖြစ်ပါလိမ့် မယ်။
ဆရာလဲ အဲသည်စာအုပ် အပိုင်ဝယ်ထားတာ ရှိပါတယ်။
"ဆရာကြီးလမ်းညွှန်တာက ပုဒ်မတွေ ဘာတွေနဲ့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ 'အဓိပ္ပါယ်တစ်ခုထက် ပိုပေးထားတဲ့ ဝေါဟာရ ဆိုရင် တစ်ခုပဲ ဖော်ပြတာနဲ့ အမှတ်ပြည့်ရတယ်'လို့ ပြောတာပါ။
"ပုဒ်မ ပါရင် တစ်ခုပဲရတယ် ဆိုတာမျိုး ပုံသေမှတ်ထားလို့ မရဘူး ထင်တယ်။
ကိုယ်က စာမကျက်နိုင်ရင်တော့လဲ ကိုယ့်သဘောပေါ့လေ"
"ဆရာကလဲ...တစ်ခုဖြေလဲ အမှတ်ရ နေတာပဲဥစ္စာ၊ နှစ်ခုကျက်တော့ အလုပ်ရှုပ်တာပေါ့။ တော်ကြာ မှားဖြေမိရင်လဲ အမှတ်လျှော့ခံ ထိအုံးမှာ"
"အဲသည်လို ဖြေရင် အမှတ်ရနိုင်တယ် ဆိုတာလဲ ရှိတယ်၊ မရနိုင်ဘူး ဆိုတာလဲ ရှိတယ်"
"ဟောသည်မှာ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းမှာ ရေးထားတာ ဖတ်ကြည့်လိုက်"
"ပြဋ္ဌာန်းစာပါအတိုင်း အတိအကျ ဖြေဆိုလျှင် တစ်လုံးတစ်မှတ် ပေးရန်- တဲ့။ ဟင်..သည်လိုဆိုတော့ အကုန် ရေးရမယ် ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့"
"ဆရာကတော့ အဲသည်လိုပဲ နားလည်တယ်။ 'အဓိပ္ပါယ်တစ်ခုထက် ပိုပေးထားတဲ့ ဝေါဟာရ ဆိုရင် တစ်ခုပဲ ဖော်ပြတာနဲ့ အမှတ်ပြည့်ပေးပါ' လို့ ရေးထားတာမျိုး မဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ကလေး အမှတ်မရမှာ စိုးမိတယ်ဗျာ။
"တကယ် စာစစ်တဲ့အခါမှာတော့ စာစစ်မှူးတွေက အနီးကပ်မှာ ဘယ်လို လမ်းညွှန်သလဲ ဆိုတာ မသိဘူး။
ဆရာ့ ကျောင်းသားတွေကိုတော့ ပြဋ္ဌာန်းစာမှာ ဖွင့်ဆိုထားတာ အကုန်ကျက်၊ အကုန်ဖြေလို့ လမ်းညွှန်ထားတယ်"
"ဒါပေမဲ့ ကွင်းစကွင်းပိတ်နဲ့ ရေးထားတာတွေတော့ အကုန်ကျက်ဖို့ မလိုဘူး မဟုတ်လားဆရာ"
"ကျွန်တော်တို့ကို ဂိုက်လုပ်ပေးတဲ့ အစ်မကြီးကပဲ၊ ရှေ့ကွင်းဆိုကျက်၊ နောက်ကွင်း မကျက်နဲ့တဲ့"
'သိုး' ဆိုတဲ့ ခက်ဆစ် ဖွင့်ဆိုချက်ရဲ့
နောက်က ကွင်းထဲကစာဆို ကျက်စရာမှ မလိုပဲ။ 'ပေါင်းလန်' ရဲ့ ရှေ့က ကွင်းထဲက စာကသာ ကျက်ရတာ မဟုတ်ဘူးလား"
"မင်းပြောတာ ဟုတ်တယ်။ မင့်းအစ်မကြီး ပြောတာကတော့ မဟုတ်ဘူး"
"ဆရာ့ဟာကလဲ ကျွန်တော်ကလဲ အစ်မကြီး ပြောတဲ့အတိုင်း ပြောတာပါပဲ"
"မင်းရှင်းတဲ့ဟာက မှန်တယ်လို့ ပြောတာပါ။ မင့်းအစ်မကြီးရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်ကတော့ မှားတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
"သိုး-ခက်ဆစ် ဖွင့်ဆိုချက်ရဲ့နောက်က ကွင်းထဲကစာက ခက်ဆစ်ကို ရှင်းပြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ 'သိုးကလေ' ဆိုတဲ့ စကားကို ရှင်းပြထားတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကျက်စရာ မလိုတာပါ။
"တကယ်တော့ ရှေ့က ကွင်းထဲကစာကိုလဲ မကျက်ဘဲ ထားလို့ရတဲ့ ခက်ဆစ် ရှိပါတယ်။ ဥပမာ 'စုံပါးရိုက်' ပါ။ အဲသည်ခက်ဆစ် ဖွင့်ဆိုချက်မှာ ရှေ့ကကွင်းထဲကစာက ခက်ဆစ်ရဲ့ အသံထွက် ရွတ်ဆိုပုံကို ဖော်ပြထားလို့ ချန်ထားချင် ချန်ထားလို့ ရပါတယ်။
"ကျန်တဲ့ ခက်ဆစ်တွေမှာတော့ ရှေ့ကကွင်း ဖြစ်ဖြစ်၊ နောက်ကကွင်း ဖြစ်ဖြစ်၊ အလယ်ကကွင်း ဖြစ်ဖြစ် အရေးပါတာချည်းပါပဲ။ ချန်ထားရင် အမှတ်မရနိုင်ပါဘူး။
"ရက်တက်-ရဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်ကို ကြည့်လေ။
'ထောပေး(ထောပတ်စိမ်း) ထုတ်ယူပြီးသော နို့ရည်ကြည်' လို့ ဖြေမှ အမှတ်ရနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းသား အများစုက 'ရက်တက်' ကို မေးရင် 'ထောပေး' တင် ဖြေကြတဲ့အတွက် အမှတ်မရတော့ဘူး။
"ခက်ဆစ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ ပုဒ်မခံထားပေမဲ့လို့ အကုန်ချရေးမှ အဓိပ္ပါယ် ပြည့်စုံတာမျိုးလဲ ရှိတယ်။
'ရက်ကန်းစင်တွင် အတိုင်ချည် အထက်လေးပင်၊ အောက်လေးပင်ကို တစ်ရေဟု ခေါ်သည်။ အရေ ၃၀ ကို အကြမ်းအားဖြင့် အပင်တစ်ရာဟု ခေါ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ အပင် ၄၀၀၊ အရေနှစ်ဆယ်နှင့် ရက်သော ချည်ထည်ကို လေးရာ့နှစ်ဆယ် ချည်ထည်ဟု ခေါ်သည်' လို့ ရေးမှ အမှတ်ရနိုင်တယ်။ သည်ခက်ဆစ်မှာဆို ပုဒ်မက သုံးခုတောင် ရှိတယ်။
"သည်တော့ ပုဒ်မတွေ ပုဒ်ထီးတွေ၊ ရှေ့ကွင်းတွေ နောက်ကွင်းတွေ ဈေးဆစ်မနေဘဲ ကျက်စရာရှိတာ အကုန်ကျက်တာကတော့ အမှတ်ရဖို့ ပိုသေချာတာပေါ့ကွာ"
"ပုဒ်ကလေး၊ ပုဒ်မ မှားရေးမိရင်ကော အမှတ်လျှော့ခံရနိုင်သလားဆရာ"
"အဲဒါတော့ ဆရာလဲ အသေအချာ မပြောနိုင်ဘူး။ 'ပုဒ်ကလေး' ပါရမှာ မပါတာ၊ မပါရမှာ ပါနေတာကို စာစစ်သူက လျစ်လျူရှုထားလို့ ရချင်ရမယ်။
'ပုဒ်မ' မှား ရေးမိရင်တော့ လျစ်လျူရှု ထားလို့မရလောက်ဘူး ထင်တယ်"
"ဆရာ ခဏခဏ တွေ့ရတာ ပြောမယ်။ 'ရက်တက်'ကို ဖြေရင် 'ထောပေး (ထောပတ်စိမ်း)။ ထုတ်ယူပြီးသော နို့ရည်ကြည်' လို့ ပုဒ်မထည့် ဖြေတတ်ကြတယ်။
"အဲသည်တော့ 'ရက်တက်' ဆိုတာ 'ထောပေး (ထောပတ်စိမ်း)' လို့လဲ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်၊ 'ထုတ်ယူပြီးသော နို့ရည်ကြည်' လို့လဲ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်လို့ ဆိုလိုရာရောက်သွားတယ်။
ခက်ဆစ်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်မှန် မဟုတ်တော့ဘူး"
"ဒါတော့ ဆရာလဲ အတတ်မပြောနိုင်ဘူး။ စာစစ်တဲ့အခါ စာစစ်မှူးတွေက နှုတ်နဲ့ လမ်းညွှန်တတ်တာတွေ ရှိတယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်လေ။
ပေးရင်လဲ ရမယ်၊ မပေးရင် မရဘူးပေါ့"
"ဆရာကလဲ မသိတာ များတယ်နော်"
"အများကြီးပေါ့ဗျာ။ ဒါတွေက လျှုိ့ဝှက်ကိစ္စတွေကိုး။
ဒါ့ကြောင့် ဆရာကတော့ တပည့်တွေကို ပုဒ်ကလေး၊ ပုဒ်မ မချန် အကုန်ကျက်၊ ချရေးပြီး လေ့ကျင့်လို့ ပြောထားရတယ်"
"အင်း..မမေးမိရင် အကောင်းသား။ အခုတော့....."
Posted by Rohang king at 11:35 PM